Uphengululo lweBluboo S3: amanqaku, amaxabiso kunye nokunye! Ixabiso? | I-Androidsis
Kwakhona sinefayile ye- Ithuba lokuvavanya ngokupheleleyo esinye isixhobo esivela kwifluboo eqinile. Ngeli xesha bekukujika kwe I-Bluboo S3, imodeli ethi i-priori kwaye ngokweenkcukacha zayo zobuchwephesha inokubaluleka kuluhlu oluphakathi.
Siyayazi loo nto i-smartphone enamandla eneembono zonke kuzo zonke iinkalo ayisoloko izisa iziphumo ezilindelekileyo. Sibonile ngamanye amaxesha ukuba akwanelanga ukuba nemilinganiselo "yokuqala" ye-Smartphone ukuze iphumelele.
1 IBluboo S3, icacisa ngokwaneleyo ukuba ime ngaphandle
2 Uyilo kunye nezinto ezijongwayo
4 Ukucaciswa kobuchwephesha kweBluboo S3
5 Isikrini esikhulu kunye nesisombululo esikhulu
6 Isixhobo kunye namandla eBluboo S3
7 Isoftware ephelelwe lixesha
8 Iikhamera zeBluboo S3 kunye nokufota
9 Ibhetri ye-Bluboo S3 yenye yamandla ayo.
10 Isandi sikwakhankanya umlinganiswa ophambili
11 Eyona nto siyithandayo kunye nento esingayithandiyo malunga neBluboo S3
11.1 Eyona nto siyithanda kakhulu
11.3 Yintoni esiyithandayo encinci
12 Uluvo lomhleli
IBluboo S3, icacisa ngokwaneleyo ukuba ime ngaphandle
Sinethamsanqa ngokwaneleyo ukuba sikwazi ukuvavanya iBluboo S3 entsha kwiiveki ezimbalwa. Ngokubanzi amava omsebenzisi awakhange abe mabi. Kodwa kufuneka sitsho ukuba ayisosisixhobo esiqhubile nathi saphambana. Zininzi ii-smartphones esizizamile, kwaye le ngokukodwa ayiphumelelanga ukuthandana.
Singayichaza iBluboo S3 njenge-Smartphone engalinganiyo. Kwaye kungenxa yokuba abavelisi bayo bengaphumelelanga ukuba ukusebenza komsebenzi wayo ngamnye kuyafana. Ezinye izinto zibonakala zilungile, kwaye ezinye zimbi. Kwaye asifumani bhalansi iyimfuneko ukuze umndilili wezibonelelo zayo ufike kumhlathana.
El imbonakalo yomzimba ibonisa iBluboo S3 entsha ayibonakalisi ukuba nobuganga. Siyabona ukuba icandelo loyilo alikhange lithathe umngcipheko ngokungeyomfuneko. Inkqubo ye- Imigca yokwakhiwa kwayo zezona zakudala, nangona sifumana ngaphambili iphaneli ye-intshi ezi-6 in 18: 9 yefomathi yangoku. Umzekelo ocacileyo wokungalingani esithetha ngako. Apha ungathenga iBluboo S3 yakho: IBLUBOO S3
Uyilo kunye nezinto ezijongwayo
Ngaphambili kwesixhobo sifumana enkulu Iscreen se-intshi ezi-6 esenziwe nguSharp ukuhambisa isisombululo Epheleleyo HD +. Sibona indlela phambili ngayo ndixakeke phantse ngeepesenti ezingamashumi asibhozo Kwiskrini sakho. Kwaye sinohlobo oluhle kakhulu lwe-18: 9.
Sisoloko sithanda ukufumana Izibane zezaziso ze-LED. Phezulu, ecaleni kwesithethi. Kwiifowuni kunye nezinye izaziso sibona ukukhanya esinokumisela kunye nokutshintsha umbala kuthi. Njengoko sihlala sisitsho, uya kuphoswa zii-LED kwifowuni xa wakhe wazisebenzisa. Ukuba sele uyisebenzisile, uyazi ukuba ukukhanya okulula ngombala kwenza izinto zibe lula.
Isakhelo apho isikrini sidityanisiwe sakhiwe nge ingxubevange emnyama yentsimbi ephezulu. Ukuyichukumisa kubonakala yomelele, nangona kuya kuba yimfuneko ukubona indlela emelana ngayo nemithambo kunye nokuhamba kwexesha. Zininzi ii-smartphones ezithi ngethontsi elincinci linciphe emaphethelweni kwaye ukubonakala kwazo kuphulukana nenani elipheleleyo.
Kulo icale lasekhohlo zibekwe amaqhosha amabini. Omnye umde kuye ulawulo lwevolumu, kunye encinci, esetyenziselwa i vala kwaye uvule. Icandelo eliphezulu likhululekile kumaqhosha. Kuyo Kwicala lasekunene sifumana indawo yamakhadi e-SIM, y Ikhadi inkumbulo
Kwaye kwi ezantsi sifumana, embindini, kwaye sikhatshwa yimingxunya apho ikhoyo isithethi kunye nemakrofoni, i Isinxibelelanisi sohlobo C lwe-USB. Olunye uphawu lwendaleko lunesihlanganisi sanamhlanje. Ngelishwa, oku kuthetha ukususa i-mini Jack audio port.
Kulo ngasemva Sifumene enye yokuphoxeka okukhulu kule Bluboo S3. Izinto ezikhethiweyo Ukupheliswa kwesixhobo asithandanga akhonto. Sifumene iplastiki erhabaxa ukuba ngokweenkcukacha zobuchwephesha zefowuni iphelelwe lixesha. Siye saqaphela intshukumo eguqukayo ngasemva ukuba sicinezela embindini.
Umqolo weplastikhi kamgangatho onjalo awutshati kakuhle nge ikhamera yeefoto ezimbini. Kodwa ke bathathe isigqibo ngale Bluboo S3. Sinendawo ekumntla ongaphezulu ikhamera enee-lens ezimbini ezikhoyo ngokuthe nkqo. Ngasekhohlo kwakhe sibona a I-flash ephindwe kabini ngamandla amahle kakhulu okuqaqamba.
Ngaphantsi nje kwekhamera, kwaye nokuba iyinxalenye yentsimbi enye efakwe ngasemva, yiyo umfundi weminwe. Indawo ekufutshane kakhulu nekhamera ibangela ukuba amaxesha amaninzi sityale umkhondo weenyawo kwilensi.
Nje ukuba ibhokisi ivulwe, njengesiqhelo, sikuxelela yonke into esinokuyifumana ngaphakathi. Ukongeza kwisixhobo, esiziva sinzima kakhulu xa usithatha, siyafumana ezinye izinto ezipholileyo. Asisoloko sifumana okungaphezulu kunokuba kuyimfuneko ngokungqongqo, ke xa umenzi eneenkcukacha ezongezelelweyo, sikuxelela ngako.
Njengesiqhelo, sinayo Intambo yokutshaja kunye nokunxibelelana kwedatha, kule meko ngokupheliswa kwe- Uhlobo C lwe-USB. Kwaye naye isiguquli ngokudibanisa nombane ngoku, eza kwifomathi yaseYurophu. Njengoko besesitshilo, iBluboo S3 inemva ngeplastikhi egqityiweyo esingayithandiyo inwele. Kodwa ukuba awufuni ukuba iphelelwe okanye yonakalise, kwibhokisi yayo sifumana isipho Icala elimnyama lesilicone.
Kufuneka sitsho ukuba imeko ye-silicone ihlala ixabiswa. Ityala liyasifanela isixhobo, kodwa lisenza sibe sibi kakhulu. Ukuchukumisa kwayo kuthambile, kwaye kunokubamba okungcono kunesixhobo uqobo. Kodwa njengoko sisitsho, ukuba umva ngeplastikhi mibi. Kwimeko ye-silicone evuliwe, siyayithanda ifowuni nangaphantsi.
Sikwafumene i isikrini sokugcina isikrini esisiseko, ayiyiglasi enomsindo, kodwa iyaxatyiswa. Sinazo, njengoko kulindelekile xa isixhobo sikhetha ukucinezela i-3.5 Jack audio port, ene iadaptha yokudibanisa ii-headphone zethu kwizibuko lohlobo C lwe-USB.
Njengomdla, ngaphakathi kwebhokisi yeBluboo S3 sifumana i Intambo ye-USB eneziphumo ezintathu ezahlukeneyo. Ngayo sinokudibanisa isixhobo sethu kwikhompyuter ngombulelo kwimveliso yohlobo lwe-USB.Kodwa ikwanayo nemveliso encinci ye-USB, kunye nenye yezixhobo ze-iOS. Into enokuba luncedo ngaphandle kwamathandabuzo, kwaye nayo iyaxabiswa.
Ukucaciswa kobuchwephesha kweBluboo S3
Isikrini I-6-intshi Sharp 1080 x 2160 IPS LCD (FHD +)
Inkqubo yokusebenza Android 7
Inkqubo IMediaTek MT6750T I-Octa-Core-4 x 1.5GHz ARM-A53 Cortex - 4 x 1.0 GHz
GPU I-ARM Mali-T860 MP2
Imemori yeROM 64 GB
Cámara trasera I-Samsung Dual 21 + 5 Mpx ene-f / 2.0 ye-CMOS sensor
Ikhamera yangaphambili Isamsung 13 Mpx
Ibhetri 8.500 mah
Ubukhulu 75.5 x 157.8 x 11.6
U bunzima 280 g
Ixabiso 199.99 €
Ikhonkco lokuthenga IBLUBOO S3
Isikrini esikhulu kunye nesisombululo esikhulu
Kwiskrini esonyusa i-S3, uBluboo ukhethe ukuba nefayile ye- umenzi onomnombo. Kwaye ukhethe utyikityo Sharp. Inye Iscreen se-intshi eyi-6 ifomathiwe kumlinganiselo we Umba we-18: 9. Ibe isisombululo 1080 x 2160 px, koko kukuthi Epheleleyo HD +, Ubuninzi be Iiphikseli ezingama-402 nge-intshi nganye.
Isikrini esikhulu esinesisombululo esingaphezulu ngokwaneleyo ukuba sonwabele umxholo wethu owuthandayo. Kwakhona ukubona ngokucacileyo iifoto kunye nevidiyo esinokuthi sizithathe ngekhamera. Ngokuqinisekileyo ubungakanani obulungileyo, isiya isuka kwii-intshi ezi-5, ekulungeleyo ukuyisebenzisa.
Kwi-Androidsis singabakhuseli abathembekileyo bezikrini ezinkulu. Kwaye siwuncoma umsebenzi owenziwe ngamaqela ayiliweyo e-smartpon. Sibona njani Izikrini ezinkulu zingena kwi-chassis yeefowuni ezingaphezulu okanye ezingaphantsi "eziqhelekileyo". Ke ukuba nakho ukuba ne-Smartphone esine-intshi ye-6-intshi ngaphandle kokuba ibe nkulu kwangaphambili kukuvavanywa.
Ngokumalunga nokumelana, isikrini seBluboo S3 sikhuselwe ngaso ICorning Golilla Glass 4. Siqinisekile ngokuxhathisa imikrwelo kwaye hayi ukubethwa kakhulu. Imiphetho yesikrini ine Umtsalane okhawulezileyo ubulela iglasi ejikeleze i-2.5D. Kwaye ukufakwa kwescreen kwisakhelo sayo kwenziwe kakuhle.
Siphinde sathanda iikona ezijikeleziweyo zesikrini. Banika imbonakalo enomtsalane emehlweni. Kwaye siyabona ukuba zombini phezulu nasezantsi indawo ehlala isimahla yanele nje ikhamera, isithethi, imakrofoni, njl.
Isixhobo kunye namandla eBluboo S3
IBluboo S3 ineprosesa yeMediaTek. Ngeli xesha ukhethe i IMediaTek MT6750T. Inkqubo I-Octa-Core, 4 x 1.5GHz ARM-A53 Cortex - 4 x 1.0 GHz. Oko sele kusetyenziswa iziphumo ezilungileyo kwinani elikhulu lezixhobo. IMediaTek MY6750T eneempawu ezinje ngo-Asus, Oppo, ZTE okanye u-Alcatel abathembele.
IBluboo ine 4GB RAM isisombululo esaneleyo ukuba isixhobo sihambe kakuhle. Ukuxhasa i-RAM, sifumana amandla e Ukugcinwa kwe64GB. Ngaphandle kwamathandabuzo i-tandem elungileyo ukuze kungabikho kunqongophala kwesantya kunye nendawo yokugcina into esiyifunayo.
Kwimizobo iBluboo S3 ine GPU kwaziwa kakuhle, i I-ARM Mali T860 MP2. Imemori yayo ye-RAM, amandla ayo okugcina kunye ne-CPU yayo yenza ukuba ifowuni ikwazi ukwenza nawuphi na umsebenzi. Kwaye asiyi kuqaphela ukusika okanye ukuxhoma kunye nasiphi na isicelo okanye umdlalo.
Ewe sikwazile ukuqaphela, xa sidlala imovie okanye iividiyo ixesha elide, yi Ubushushu obugqithisileyo Indawo yokukhwelela. Kwakukudala sigqibile ukufumana ifowuni eyakhupha ubushushu obukhulu xa "siyikhabe" okwexeshana. Nangona ngokuqinisekileyo kwimeko ye-silicone oku kungaphawuleki kangako, indawo yangasemva ishushu kakhulu.
Isoftware ephelelwe lixesha
Kwakhona kufuneka sithethe malunga I-smartphone entsha ebetha imarike ngohlobo lwakudala lwe-Android. IBluboo S3 inenguqulo Android 7.0 kwaye asinazo iindaba zohlaziyo oluzayo okwangoku. Enye ifowuni "eyazalwa" kwi-2.018 kwaye isebenza ngohlobo oludala kakhulu lwe-Android.
Kubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuba iBluboo S3 isebenza nge-Android 7.0 xa siyibona ebhokisini uqobo, kwicandelo leenkcukacha, Sifunde ukuba ine-Android 8.0. Into esinethemba lokuba uBluboo uya kuyisombulula ngokukhawuleza, okanye ubuncinci icacise. Kungenxa yokuba okwangoku, ubuncinci isixhobo esele sikwazi ukufikelela kuso asinayo inguqulelo yamva nje.
Ngokwenkoliseko yakhe simele sithi unabo umaleko wokwenza ngokwezifiso ukuba kubonakale ngathi sisebenza kunye ne-Android Oreo. Kodwa ngelishwa yimbonakalo yomzimba kuphela. Oku akuthethi ukuba iBluboo S3 ihamba kancinci, okanye iphelelwe lixesha. Nangona kwakhona sicinga ukuba uGoogle kufuneka abe ngqongqo ngakumbi kule nkalo.
Ngokubhekisele kulungelelwaniso olwenziwe ngokwezifiso, qaphela ukuba ayisiyiyo kwaphela "". Sinako ukufikelela kulo naluphi na uhlengahlengiso okanye ubumbeko. Kwaye njengoko siphawulile, kuyathandeka ukujonga, kangangokuba ngamanye amaxesha siyalibala ukuba sisebenzisa i-Android 7.
Iikhamera zeBluboo S3 kunye nokufota
Icandelo lokufota liya lisiba lelona libaluleke kakhulu kwifowuni ephathekayo. Sikunye nesikrini, kunye nebhetri inokuthatha isigqibo sokuba sikhethe enye okanye esinye isixhobo. Njengakwezinye ii-smartphones esele sikwazi ukuzivavanya, ephepheni iBluboo S3 inekhamera elungileyo. Kodwa oku akusoloko kwanele ukuba eli candelo lifumane amanqaku amahle.
IBluboo S3 ine ikhamera ngasemva ezimbini apho iilensi zibekwe ngokuthe nkqo ngaphezulu kwenye. UBluboo uphathise icandelo lekhamera ye-S3 kwi-Samsung. Kule meko sinekhamera ene Isisombululo se-21 se-Mpx kunye ne-5 Mpx. Kwaye ine Inzwa ye-CMOS ene-focal aperture 2.0, konele?
Kwiifoto ezithathiweyo ngokukhanya kwendalo okuhle, Los ziphumo unyana yamkelekile. I imibala iziphumo Igcwele, Kwaye kubonwe kwiscreen sefowuni bajongeka ngandlel 'ithile zikhanya ngaphezu kokuba zinjalo. Kodwa ukukhathalela isisombululo kunye nobukhali sifumana iziphumo ezilungileyo. Kwifoto ezele zii-shades zombala ofanayo, inzwa isibonise imibala eyahlukileyo kakuhle.
En iifoto zomhlaba siqaphela ngokuqinisekileyo ukulahleka kobukhali, ngakumbi kwaye njengoko kusengqiqweni ngezinto ezikude lee. Nangona kunjalo ngekhe siqwalasele iziphumo ezibi ifunyenwe. Inkqubo ye- Uluhlu lwemibala kubonisiwe ububanzi kwaye iifom eziphambili zicacile.
Ingxaki iza nokusondeza. Ngokwendalo, umgangatho wefoto kunye nokusondeza kwedijithali ubuninzi, ulahlekelwa ngamanani apheleleyo. Kwiifoto ezithathiweyo ngeBluboo S3 sibona indlela ukuqaqamba kwemibala sithetha ngayo iphela ngandlela thile kwiifom. Mhlawumbi ukuze kulungelelaniswe ukungabikho kwesisombululo sibona indlela iimilo ezilahleka ngayo ngakumbi ngakumbi kunokuba bekulindelwe.
Asikayithandi i- ukusebenza kwegradient, ebizwa ngokuba yi "Blur" kwesi sixhobo. Xa siyisebenzisa sinokukhetha ngaphezulu okanye ngaphantsi kobungakanani benxalenye yefoto eza kuhlala ijolise kuyo. Inqaku lelo esi sixhobo asichanekanga ncam. Nokuba ubeke umfanekiso ophambili embindini, kwaye ucofe kwiscreen ukuzama ukugxila kwinto ethile, iziphumo azikho njengoko kulindelwe.
Ngokuthanda ikhamera kufuneka siyitsho loo nto ngeefoto ezisondeleyo sifumana ukubanjwa okuphezulu. Sibona ubukhali obukhulu. Isisombululo esihle ngokwenene. Kwaye ngaphezu kwayo yonke loo nto, iseti efanelekileyo yemibala kunye nokucaca kwezi fomu.
Njengakwezinye iinkalo zale Bluboo S3, i ukusebenza kwekhamera yefoto kubonakala ngathi ukungalingani. Sifumene iziphumo ezilungileyo kwezinye iindlela, kwaye siyaphoxa kwezinye. Okulungileyo kukude nokubi ikhamera yakho isinika yona, kwaye loo nto yenza ukuba i-avareji yehle kakhulu.
Yongeza ukuba iBluboo S3 ine I-flash ephindwe kabini ye-LED ekwaziyo ukunika ukukhanya kubumnyama bakho obumnyama. Kubalulekile ukuba nokukhanya okongezelelekileyo nakwiifoto zasemini ngokuchasene nokukhanya.
Kulo ikhamera yangaphambili sikwafumene i isivamvo esisayinwe yi Samsung. Esinesisombululo esihle. Ngekhamera 13 Mpx Iiselfie zethu ziya kuba nomgangatho omncinci. Kulungile ukubona ukuba iifemu zinekhamera yangaphambili njengenxalenye ebalulekileyo kwicandelo lokufota.
Ibhetri ye-Bluboo S3 yenye yamandla ayo.
Sele sithethile kwasekuqaleni ukuba iBluboo yiSmartphone enobunzima obuphezulu. Yinto esiyiqaphelayo ngaphandle kwebhokisi. Kwaye kuyabonakala xa siyithelekisa nezinye izixhobo. Okanye xa siyisebenzisa ixesha elide ... iba nzima kakhulu.
Kwaye ayisiyiyo nayiphi na imbono yobuqu. IBluboo S3 ifikelela kwi-280 g yesisindo kwisikali. Kweminye, ukubalasela okunokusetyenziselwa ukwenza isigqibo ngokuzenzekelayo kwesinye isiphelo sendlela. Kodwa ntoni kwabanye abaninzi ayinayo tal ukugqitha Ukwazi kwaye ngaphezu kwako konke ukuxabisa ukuba bungakanani ubunzima obufunekayo.
Nge I-8.500 mAh ibhetri iBluboo S3 inentambo okwexeshana. Nokuba uyazi ukuba sijamelene ne-Smartphone ngebhetri enkulu, ubude bayo busothuse kamnandi. Ngokusetyenziswa okuphakathi kwesixhobo, ihlale ukuya kwiintsuku ezintathu ezipheleleyo yokusetyenziswa.
Ukubeka u-kodwa, sibhekisa kwi ubushushu Sizamile iBluboo S3. Xa udlala umculo okanye iividiyo kangangemizuzu engama-30 siyaqaphela ukuba isixhobo siyatshisa. Nangona oku kunyuka kwamaqondo obushushu kungachaphazeli ubomi bebhetri yesixhobo konke konke.
Kukwadibanisa ukuba ne ibhetri exhasa ukutshaja ngokukhawuleza. Ukukwazi ukusebenzisa isixhobo kangangeentsuku ezintathu zilandelelana, kwaye ukufuna iyure kuphela ukuze ubhatale ngokupheleleyo kunyango lokwenyani. Itshaja ayisayi kuba yinto ebalulekileyo yokuqhuba yonke imihla.
Isandi sikwakhankanya umlinganiswa ophambili
IBluboo S3 inayo isithethi sangaphandle. Into esele ibe ngumgangatho kubo bonke abavelisi. Into esiyijonga njengempazamo inikwe impumelelo yezithethi zangaphandle kwimarike. Isixhobo esikwazi ukuhambisa isandi sestereo kunye namandla amakhulu esandi sinokubetha kwintengiso.
Sinomnxeba onikezela amandla esandi. I ivolumu oko kufikelela kungaphezulu kokwaneleyo ukudlala umculo kwaye uve kakuhle nangaphandle. Kodwa kanye. Isandi siphuma ngokucacileyo kwaye khange siqaphele ukungcangcazela okanye ukugqwetha. Kodwa inokuphuculwa kakhulu ngokuba nesibini sezithethi endaweni yesinye.
Phawula njenge ezintle sifumene Isinxibelelanisi se-FM. Unomathotholo awonelanga kwisixhobo esisetyenziselwa ipesenti ephezulu ukuzonwabisa. Kwaye ukukwazi ukumamela ukuhlala unomathotholo ngaphandle kwesidingo sonxibelelwano lwedatha kuhlala kulungile.
Ngakolunye uhlangothi, Ndifuna intambo yeadaptha ukumamela umculo esingayithandiyo. Ukupheliswa kwesinxibelelanisi seJack sefowuni entsha, phantse lonke ngenxa yotshintsho lwesidibanisi sohlobo C lwe-USB, alugqibi ukukholisa. Ukuba kufuneka usebenzise iadaptha ukuba asinayo ii-headphone zeBluetooth kubonakala ngathi kubuyela umva kunangaphambili.
Eyona nto siyithandayo kunye nento esingayithandiyo malunga neBluboo S3
Kuya kufuneka siziphinde kwakhona, kodwa iBluboo S3, enombono wehlabathi, ibonakala ingalingani. Njengoko ubonile ukuba sifumene iinkalo apho ikhusela kakuhle, kwaye ezinye apho kuthobeke ngakumbi. Nakwezinye iindawo, njengefoto, sifumana Umahluko omkhulu wokusebenza.
Ke ngoko, ngokumangalisayo, sinokufumana izinto ezifanayo kubuhle nakwingozi. Umzekelo ocacileyo yinkangeleko yomzimba. Inxalenye engaphambili enobungakanani bescreen sayo, nkqu nendawo ekubekwe kuyo izinto ezingasemva esizithandayo. Kodwa sijonga izinto ezikhethiweyo zomqolo wazo ngempazamo etyebileyo.
Eyona nto siyithanda kakhulu
La ubomi bebhetri ngokungathandabuzekiyo yenye yeendawo zayo ezomeleleyo. Ukuba isixhobo siyakwazi ukuxhasa isingqisho sethu ngaphezulu kweentsuku ezimbini ezizeleyo kulungile. Kwaye ukuba umthwalo yebhetri yenziwa kwifayile ye- khawulezaKulungile, kungcono.
El ubungakanani bescreen yimpumelelo. Sikuthandile ukubona isikrini esizi-intshi ezi-6 kwi-Smartphone efikelelekayo. Kwaye nayo ine Isisombululo esihle ukuze amava omsebenzisi anelise kangangoko.
Sisoloko siqwalasele u "pro" ukuba abe nefowuni Umsakazo we-FM. Umculo, iindaba, iinkqubo, konke esinako ngaphandle kokusebenzisa idatha ukuba yingxaki.
Yintoni esiyithandayo encinci
Ubunzima inokuba ngumqobo. Kwimarike apho ubomi bebhetri kunye noyilo oluncinci lwefowuni lukhuphisana, iBluboo ngokucacileyo ivula ubomi bebhetri obuhlala ixesha elide. Kwaye oku kuyenza ifikelele kubunzima be 280 g. Kuyadlula kwezinye, kuyanyamezeleka kwabanye, kodwa ubunzima obukhulu nangona kunjalo.
El Ukufudumeza ukuba amava eBluboo S3 xa siyisebenzisa ixesha elide iyasikhathaza. Ukudlala nje imovie kwiNetflix, okanye ukudlala umculo ovela kwiSpotify kangangesiqingatha seyure, ifowuni iyatshisa. Ngokoluvo lwethu ngaphezulu kweakhawunti.
El umfundi weminwe ihlala iluhlobo oluhle. Kuyinto elula kakhulu ukuba ukuvula ifowuni yethu ngokukhawuleza. Kwaye ukhuseleko lwefowuni kubalulekile ukudibanisa. Inyani yile yokuba umfundi ofaka iminwe yeBluboo S3 ayilunganga "kakuhle". Sifuna ukufundwa okungaphezulu kunokuba singathanda ukuvula ifowuni. Kubonakala kuthi ukungacacisi kunye nokucotha.
umfundi ongacacanga weminwe
Ukuba iBluboo S3 ikuqinisekisile, ungayithenga apha: IBLUBOO S3.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » Ukuphonononga iBluboo S3
Khuphela iRaskulls: kwi-Intanethi ngoku: imidlalo yabadlali abaninzi evela kubenzi beFruit Ninja